बिना पासवर्ड 🥇 अनुयायीहरू अनलाइनमा लग इन गर्नुहोस्
पासवर्ड बिना इन्स्टाग्राममा लगईन गर्नुहोस्
इन्स्टाग्राम अहिलेको सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रयोग भएको सामाजिक नेटवर्कहरू मध्ये एक हो, जसका लाखौं प्रयोगकर्ताहरू छन्। उही, तिनीहरू यस मञ्चको दैनिक प्रयोग गर्छन्। कुन स्थिर नवाचारहरुमा राखिन्छ, यसको प्रयोगकर्ताहरु लाई अधिक आकर्षक अनुप्रयोग र एक बढ्दो आरामदायक अनुभव प्रदान गर्न। यद्यपि तपाईको स्थिति अहिलेको जस्तो रमाईलो नहुन सक्छ कुनै कारणका लागि तपाईंसँग पहुँच छैन इन्स्टाग्राम। र यस समस्याको लागि त्यहाँ धेरै कारणहरू हुन सक्छन्, जस्तै: पासवर्ड बिर्सनु वा हराउनु र यसलाई रिकभर गर्न सक्षम नहुनु, वा त्यो अनुप्रयोग आफैंले तपाईंलाई पहुँच त्रुटि दिन्छ वा कसैले ह्याक गरेको छ, यी सबै केसहरूमा तपाईंलाई आवश्यक छ, पासवर्ड बिना इन्स्टाग्राममा लगईन गर्नुहोस्।
पहिले, तपाइँले यो जान्नु पर्छ पासवर्ड बिना इन्स्टाग्राम प्रवेश गर्न कुनै तरिका छैन, नभएसम्म, तपाईंले खाता ह्याक गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ। कि यो जानकारी को उद्देश्य को लागी, कारण यो हुन सक्छ कि तपाइँको खाता ह्याक गरिएको थियो र तपाइँ यसलाई फिर्ता लिन चाहानुहुन्छ वा तपाइँको अवस्था हो किनभने तपाईलाई आफ्नो पासवर्ड याद छैन। तपाईंको खातामा पहुँच पुन: प्राप्ति गर्न त्यहाँ अन्य विकल्पहरू छन्। साथै, यो पनि याद गर्नुहोस् कि तपाइँ अन्य उपकरणहरूबाट पनि इन्स्टाग्राम पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई यो कसरी गर्ने भनेर बताउँछौं पीसी वा म्याकको लागि इन्स्टाग्राम डाउनलोड गर्दै.
त्यहाँ पहुँच प्राप्त गर्न वा पासवर्ड बिना इन्स्टाग्राम प्रवेश गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। र तपाईं मात्र गर्नुपर्छ चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
FoneMonitor प्रयोग गर्दै
यसको लागि यस वेबसाइटमा जानुहोस् र बटन थिच्नुहोस् "साइन अप गर्नुहोस्" नि: शुल्क खाता प्राप्त गर्न। तुरून्त, यसले तपाईंलाई पृष्ठमा निर्देशन दिनेछ "खाता बनाउनुहोस्"। ईमेल आईडी र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् र थिच्नुहोस् "दर्ता गर्नुहोस्"। पहिले नै तयार छ, उद्देश्यको विवरण लेख्नुहोस् जुन यस अवस्थामा तपाईंको नाम, उमेर हो।
तुरून्त, लक्षित उपकरण कन्फिगर गर्नुहोस्, को अनुसार अपरेटिंग प्रणाली। यदि यो छ Android, तपाईंले FoneMonitor मोबाइल अनुगमन अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। तयार भएपछि तपाईको खातामा लग ईन गर्नुहोस् र अनुमतिहरू दिनुहोस्। त्यसपछि बटन थिच्नुहोस् "अनुगमन सुरू गर्नुहोस्"।
आईओएस हुनुको मामलामा, तपाईंले कुनै पनि अनुप्रयोग स्थापना गर्न आवश्यक पर्दैन। मात्र प्रविष्ट गर्नुहोस् आईक्लाउड आईडी र पासवर्ड डाटा लक्षित उपकरण र प्रेस "प्रमाणित" को, FoneMonitor प्रमाणीकरण प्रक्रिया को प्रभारी हुनेछ।
के गर्न बाँकी छ Fone मोनिटर प्यानल मा लगईन र सामाजिक अनुप्रयोग विकल्प खोल्न। साथै, प्रकार्य प्रयोग गर्दै "Keylogger" तपाईंले हराउनु भएको वा परिवर्तन गरेको पासवर्ड डिसिफर गर्न सक्नुहुन्छ।
स्पाइज़ी प्रयोग गर्दै
FoneMonitor जस्तै, यो अनुप्रयोगले तपाईंलाई पुन: प्राप्ति वा अनुमति दिन मद्दत गर्दछ पासवर्ड बिना इन्स्टाग्राममा लगईन गर्नुहोस्। थपको रूपमा, स्पाइजेलाई एन्ड्रोइड उपकरणहरूमा 4.0 संस्करण वा पछि XOUMX संस्करण वा पछि पछि आईओएस उपकरणहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसैले तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न सिक्नुपर्दछ, यी साधारण चरणहरू अनुसरण गर्दै।
पृष्ठ प्रविष्टि गर्नुहोस् www.spyzie.com/es/ एक मान्य ईमेल ठेगानाको साथ र पासवर्ड सिर्जना गर्नुहोस् प्रयोगका सर्तहरू स्वीकार गर्दै साइन अप गर्न प्लेटफर्मको।
पञ्जीकरण पछि, तपाईंले मालिकको नाम र उमेर थप्नु पर्छ लक्षित उपकरणको। साथै, तपाईंले गन्तव्य फोनको अपरेटिंग प्रणाली प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
कन्फिगरेसन को रूपमा, तपाईं यसलाई ट्याब फेला पार्नुहुनेछ "लक स्क्रिन र सुरक्षा"। त्यसो भए, विकल्प "अज्ञात स्रोतहरू" सक्षम गर्नुहोस् र प्रेस गर्नुहोस् "स्वीकार".
त्यसोभए, अनुप्रयोग खोल्नुहोस् र तपाईंको स्पियजी खातामा लग इन गर्नुहोस्, यसका लागि जारी राख्नु अघि र यो सम्झौता स्वीकार गर्नुहोस् अब तपाईं सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ.
लिंक गरिएको खाताहरूका लागि
यदि तपाईंको इन्स्टाग्राम खातामा पहुँच हराउनु अघि, तपाईंसँग थियो खातालाई फेसबुकसँग जोडियो. तपाईंले भर्खर प्रमाणहरू खोज्नुपर्नेछ, त्यो हो, फेसबुक इन्टर गर्नुहोस्, "लि accounts्क खाताहरू" मा, त्यसपछि थिच्नुहोस् "मैले मेरो पासवर्ड बिर्सें" र चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
इंस्टाग्राम पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस्
पहिले, यो कसरी पहुँच गर्ने देखाइएको थियो इन्स्टाग्राम पासवर्ड बिना, तर यदि तपाईं रिकभर गर्न वा पासवर्ड रिसेट गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं यी विकल्पहरूमा विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ।
इन्स्टाग्राम खाता र जिमेल खातासँग जडान भएको मामलामा, तपाईं सक्नुहुन्छ पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस्। पहिले, तपाई जीमेल प्रविष्ट गर्नुहुन्छ र फेसबुक जस्तै, खाता प्रमाणहरू को लागी हेर्नुहोस्।
इन्टग्राम अनुप्रयोग प्रविष्ट गर्नुहोस् र लिंक थिच्नुहोस् "मद्दत लग ईन प्राप्त गर्नुहोस्"। त्यसो भए, विकल्प "प्रयोगकर्ता नाम वा ईमेल प्रयोग गर्नुहोस्" थिच्नुहोस्
जीमेल खाताको इन्स्टाग्राम खातासँग सम्बन्धित प्रमाणहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्। जब त्यहाँ अर्को पृष्ठ बटन थिच्नेछ "ईमेल पठाउनुहोस्"
जीमेल खातामा खातामा जानुहोस् र मेल खोल्नुहोस्। त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् "इन्स्टाग्राममा तपाइँको पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस्" र यसले एक पृष्ठ खुल्नेछ जहाँ तपाइँले दुई पटक नयाँ पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
अन्त्यमा, क्लिक गर्नुहोस् "पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस्" र तपाइँ तपाइँको खाता पुन: पहुँच हुनेछ।
SMS को साथ
अन्त्यमा, तपाईसँग एक मार्फत तपाइँको पासवर्ड रिकभर गर्न विकल्प छ एसएमएस। यसको लागि, इन्स्टाग्राम लगइन पृष्ठमा जानुहोस्। "क्लिक गर्नुहोस्के तिमीले बिर्सेका छौ? " जब तपाइँले यो कार्य गर्नु भएको छ, यसले तपाईलाई कुन प्रकारको रिकभरी चाहिन्छ भनेर सोध्नेछ। त्यसपछि प्रेस गर्नुहोस् एसएमएस र तपाईंको फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् (अन्तर्राष्ट्रिय कोडको साथ) जुन के तपाइँ तपाइँको इंस्टाग्रामसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। यदि डाटा सहि छ भने, केहि मिनेटमा तपाईले जानकारीको साथ सन्देश प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईंको पहुँच कोड रिसेट गर्न र तपाईंको इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहोस्। तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ सत्यापन कोड बिना इन्स्टाग्राम प्रविष्ट गर्नुहोस्.
निजी इन्स्टाग्राम 2019 कसरी राख्ने